Asa tanana vita tanana, lamaody kokoa noho ny hatramin'izay | Famoronana an-tserasera
Ho hitanao fa firy ny vokatra hitanao any amin'ny magazay na amin'ny tambajotra manana ny marika tanan-tanana, na inona ilay zavatra mitovy amin'ny tanana.
Ary, io karazana famokarana io dia lamaody kokoa noho ny hatramin'izay. Ho fanehoan-kevitra amin'ny tsenan'ny famokarana marobe ho an'ny vokatra mitovy sy amin'ny ankapobeny ambany kalitao, mipoitra indray ny asa tanana taloha, izay zava-dehibe ny fizotry ny famokarana toy ny valiny farany.
Asa arak'asa izy io, izay manisy lanja ny kanto sy manatanteraka am-pitiavana ny asany, izay omena lanja kokoa eo amin'ny tsena ankehitriny.
Damaody ihany koa io ny fivarotana an'io asa io amin'ny alàlan'ny tsena. Izy ireo dia fivarotana an-tserasera izay ahitan'ny mpampiasa "mombamomba azy ao anaty lampihazo, ity farany no miandraikitra ny fitantanana ny fandoavam-bola, ny fampifandraisan'ny mpampiasa sns., Ho takalon'ny famarotana kely isan-jato, izay miova arakaraka ny tranokala. Amin'ny sasany, ianao koa dia mandoa isaky ny doka navoaka.
Ity karazana fivarotana ity dia mety ho an'ireo manomboka mivarotra eto amin'ity izao tontolo izao ity ary tsy afaka mampiasa vola be amin'ny orinasa ara-batana izy ireo (izay mety hidika hoe fanofana, sns.), na amin'ny tranokalan'izy ireo manokana (mazàna dia dingana lafo kokoa izany). Amin'izany fomba izany, ho takalon'ny famatsiam-bola farafaharatsiny, ny mpanao asa tanana dia afaka manala sarona ny tenany amin'izao tontolo izao. Matetika izy ireo dia manana toerana tsara ao amin'ny Google, saingy ny fatiantoka dia mipoitra ao anatin'ny tranonkala avo dia avo ny fifaninanana vokarina, noho izany ny fametrahana ny magazanao amin'ny alàlan'ny tenifototra na marika, ary koa fitaovana hafa, toy ny sary matihanina dia tena ilaina. Ny fampiroboroboana izany amin'ny sehatra hafa sy amin'ny tambajotra sosialy dia mety ho fanampiana ho an'ilay mpanao asa tanana kely.
Ny vokatra tena izy sy tena manavao, na ilay manana toetra manokana ho an'ny mpihaino iray, dia matetika no hanana ny varotra betsaka indrindra, saingy tsy izany foana no izy. Ny vokatra izay mitantara tantara na taratry ny fomba fiainana mifanaraka amin'ny olona mihinana azy dia mandresy ihany koa.
Ao amin'ny tambajotra dia misy maro karazana karazana mpanao asa tanana izay amidio amn'ny mpanatrika mora tohina manome lanja azy ireo ny vokatra avoakany. Afaka mahita asa tanana isan-karazany sy am-boalohany isika, ireo karazan-vokatra tsy mahazatra rehetra tsy ampoizina isan'andro.
Manaraka izany dia hahita ny sasany amin'izy ireo isika, mitokona noho ny maha-izy azy.
1 Saha zaridaina
2 Origami ary maro hafa
3 Zavatra hafa tany am-boalohany
Fivarotana sy sekoly noforonin'ilay artista espaniola María Ruano, manam-pahaizana manokana ao amin'ny famoronana zaridaina kely amin'ny tohana isan-karazany, toy ny kapoaka. Izy ireo dia zaridaina bitika izay itantaran'ny zavamaniry tsirairay sy ny ravaka tsirairay ny tantara. Tontolo nofinofy izay mampifandray antsika amin'ny natiora, ho vokatra vita tanana izay tsy maintsy karakaraina sy manilika.
Origami ary maro hafa
Origami dia zavakanto iray misy ny fanomezana endrika samihafa amin'ny taratasy amin'ny alàlan'ny famolahana azy, afaka manambatra taratasy miloko ary mamorona sary mahavariana tokoa. Izany no zava-nitranga tamin'ny asa tanana nataon'i Origami ary maro hafa. Sary namboarina tamim-pitandremana sy feno loko, endrika am-boalohany izay mampita tontolo feno fifaliana sy tanjaka.
Zavatra hafa tany am-boalohany
Mandala dia tena lamaody, satria mariky ny fandriam-pahalemana anaty sy ara-panahy. Efa zatra mahita azy ireo nolokoina amin'ny faritra maro samihafa: lamba, hazo, akanjo, kaopy, lovia ... fa ny mpanao asa tanana vaovao kosa dia lasa lavitra kokoa, mamorona mandala be pitsiny misy kofehy miloko. Azontsika atao ihany koa ny mahita ilay tambajotra feno volavola kanto nolokoina tamin'ny vatolampy na tamin'ny karazana haavo voajanahary hafa, toy ny fanapahana ny rantsan'ny hazo.
Ny akanjo sy kojakoja vita amin'ny tànana vita amin'ny tanana koa dia be mpitady ankehitriny. Inona koa, izay rehetra azo manokana sy manokana dia izay mandresy ny mpanjifa. Mugs miaraka amin'ny sarin'ny alikao, sary nolokoina tamin'ny fialan-tsasatrao mahafinaritra, dia ohatra amin'ny snsetera lava. Tontolo iray hahitana, izay tsy manam-petra ny fahafahany mamorona ary tsy afaka mampitaha izany isika amin'ny ankapobeny.
Inona no andrasanao hanohanana ireo mpanao asa tanana kely?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Asa tanana vita tanana: lamaody kokoa noho ny hatramin'izay
Ny mpanao sary ho an'ny ankizy: olona iray manan-danja amin'ny fanabeazana ny faralahy